जनता रछ्यानमा, नेता साम्यवादको ओछ्यानमा ! – Everest Dainik – News from Nepal
जनता रछ्यानमा, नेता साम्यवादको ओछ्यानमा !
नपत्याए जहाज सम्बन्धि आलोचना गरे मुद्दा दर्ता गर्ने बारेमा उरन्ठेउला युवा पर्शुराम बस्नेतको उर्दी हेर्नुस् । पहिले चौबीसै घन्टा जहाज भट्टाउँदै आश्वासनका पोका थमाए, अहिले आलोचना गर्नेलाई मुद्दा हाल्ने भनेर बर्बराउँदैछन् । पंक्तिकार स्वयं मुद्दै मुद्दाले जेलिएका ती महासयलाई पहिला साइबर क्राइम र मौलिक हकका बारेमा आफै ट्युशन पढ्न सुझाउँछ।
भुकम्प पीडितलाई पाल र थाल पठाए। न पालमा तालु ओतियो, न थालमा सितो भेटियो। काँग्रेस होउन् या कम्युनिष्ट, म हाने झैँ गर्छु, तँ रोएझै गरेस भन्ने खेती देखियो। सुशासन र समृद्धिको ओछ्यान लगाउन सिपालु कम्युनिष्ट नामका नेपाली अक्कलगुमहरु यतिबेला गहिरो निदमाछन् ।
जसरी देशकै राजधानी अर्थात ‘सपनाको स्मार्ट सिटी’ पानीमा चुर्लुम्म डुवेको छ, ठिक उस्तैगरी विकास र निकासका आकर्षक शब्द रचियताहरुपनि यतिबेला सत्ताको रसपानले ढाडिएकाछन् । मैले यसो भन्दैगर्दा ‘म काँग्रेस भएको आरोप लाग्नसक्छ। शक्तिशाली सरकारका सुसारेहरुको चित्त दुख्नसक्छ र कसैलाई पिरोपनी लाग्न सक्छ।’ ‘सत्य तितोहुन्छ’ भनी बुझ्नुभएका जानकारहरुलाई मैले भन्नुपर्ने केही छैन। कृपया जस्तो लाग्ला त्यस्तै ग्रहण गर्नुहोला।
हिउँदभरी ‘धुले काठमाडौं’ भनेर चिनिने राजधानी थोरै वर्षाात हुँदा ‘हिले’ र अल्लि बेस्सरी पानीपर्दा जलमग्न हुनेगरेको छ। एक हिसाबले सोंच्दा त बतासे नेताको भासणमा लठ्ठिएर आँखा चिम्लिँदै मतदान गर्ने जनतालाई चाहे अनुसारकै फल मिल्याछ, भन्न मनपनी लाग्छ। तर मानिस भएपछि मानवीय समवेनालाई भुल्नु हुँदैन। प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
उछिट्याएर भित्तामै पुर्‍याउँदा पनि सरकारको फेरो समाएका केही स्वाँठहरुले दिने जवाफ् हो यो। हो, प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले छेक्न सक्दैन, तर ती विपत्तिजन्य महामारीबाट बच्न सक्ने उपाए अवलम्बन गर्न त सकिन्छ नि महासय। कि त्यो पनि सकिन्न ? विकट वस्तीमा प्रत्येक वर्ष मानिसलाई लाग्ने झाडापखाला रोक्न त अपनाउनु पर्ने पुर्व सचेतना अनुसरण गर्नुपर्‍यो नि। पोहोर लाग्यो अहिलेपनी लाग्छ, यो महामारीलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेर समाधान हुन्छ त ? ठमेल हिलोमा धँसिएको छ, मन्त्रीहरु काँग्रेसले के गर्‍यो ? भनि प्रश्न गर्छन् ।
बौद्ध पानीमा तैरिएको छ, झोलेहरु सरकारले पानी पार्‍या हो र ? भन्दै छक्क पार्छन् । मैतिदेवी चुर्लुम्म डुवेको छ, खोलेहरु उड्ने कार का बात मार्छन् । एउटा गतिलो ढल बनाउन सक्ने हुति नभएकाहरु स्मार्ट सिट ुका गफ दिन्छन् ? काँग्रेसले केही गरेन भनेरै जनताले कम्युनिष्टलाई मत दिएको कुरा कहिले बुझ्ने मन्त्री ज्यु ? पानी सरकारले पार्नु पर्दैन।
यो सरकार आउनु पुर्वपनी धर्तिमा आकाशबाट पानी पर्थ्यो। पहिलेपनि पानीमा तैरिन्थे असनका गल्लिहरु। तर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीु वाला सरकार आइसकेको यतिका दिनसम्म पनि कपुन्डोलका सडकहरु पौडिखेल्न छाडेनन् त किन ? हुनत हिजो अर्को कोहि सरकारमा हुँदा ‘अलछिना सरकार भएर गाडी दुर्घटना बढे’ भन्नेहरु ले यो विषयलाई अर्कै अर्थ लगाउनपनि सक्लान् ।
दुई तिहाई मत सहितको शक्तिशाली सरकार’ भनेर रुदघण्टी च्यातिन्जेल माइक्रोफोन सामाएर चिल्लाउनेहरुको थोरै साख रामबहादुर थापा (बादल) ले जोगाउन खोज्दै थिए। यद्यपि ‘मार्सी चामलको भात’ लगायतसँग सम्बधित तत्वहरुले त्यसलाई परास्त गरिसके।
मन्त्रीहरू आफ्नै मन्त्रालयका बारेमा प्रश्न गर्दा माइक धक्काएर पन्छिने, सांसदहरू गुण्डाको जमानत बस्ने, प्रहरीहरु क्विन्टलौं सुन सुलित्तै छिराएर खाँडिबाट आउनेलाई हैरान बनाउने, र प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंका खाल्डा मैले बनाएको हो र पुर्नलाई भनि सिल्पट झैँ रन्किने। के यहि हो कामरेडहरुको सुशासन ? यहि हो समाजवाद उन्मुख गतिविधि ? इतिहासमै नेपाली कम्युनिष्ट अझ त्यसमापनि पुर्व एमालेमा आश्रीत नेता र संजालमा घोप्टिने उनिहरु समर्थित फ्याउराहरुको प्रस्तुति ठ्याक्कै एउटै पाराको छ।
नपत्याए जहाज सम्बन्धि आलोचना गरे मुद्दा दर्ता गर्ने बारेमा उरन्ठेउला युवा पर्शुराम बस्नेतको उर्दी हेर्नुस् । पहिले चौबीसै घन्टा जहाज भट्टाउँदै आश्वासनका पोका थमाए, अहिले आलोचना गर्नेलाई मुद्दा हाल्ने भनेर बर्बराउँदैछन् । पंक्तिकार स्वयं मुद्दै मुद्दाले जेलिएका ती महासयलाई पहिला साइबर क्राइम र मौलिक हकका बारेमा आफै ट्युशन पढ्न सुझाउँछ। बेलाबेला ‘दुई तिहाई मत सहितको शक्तिशाली सरकार’ भनेर रुदघण्टी च्यातिन्जेल माइक्रोफोन सामाएर चिल्लाउनेहरुको थोरै साख रामबहादुर थापा (बादल) ले जोगाउन खोज्दै थिए। यद्यपि ‘मार्सी चामलको भात’ लगायतसँग सम्बधित तत्वहरुले त्यसलाई परास्त गरिसके।
‘तेत्तीस किलो सुन छानबिन’ मा कोलि भाई, ठेक्का पट्टामा मने दाई र सिण्डिकेटमा महासेठको बतासले मण्डारिएर अरु भन्दा बेग्लै उभिन खोजेका बादललाई वर्षिनै नदिई आफ्नै घानमा मिलायो। अहिले बादल, वर्षा अनि बिजुली सबै उस्तै–उस्तै देखिन्छन्। समग्रमा अहिलेको सरकारमा सहभागी कम्युनिष्ट मन्त्रीहरुको समृद्धि त अस्ति विश्वकपमा हानेको ‘मेस्सीको पेनाल्टी भन्दा पनि भद्दा’ बनिसक्यो।
काठमाडौंका चोकचोकमा महल ठडिए। देशकै औंलामा गनिएका शहरहरुमा प्लाटिङ्ग गरिएका घडेरिहरु छन् । देशकै ठुला ठुला आयोजनाहरुमा सेयर लगानीछ। करोडौंको गाडिमा हुँईकिएकै छ। कोहि श्रीमतीका नाममा त केही विदेशी बैंकहरुमा धन थुपारिएकै छ। छोराछोरीहरु विदेशी कलेजमा भर्ना छन्। अनि ‘निजी सम्पतिका मालिकहरु कम्युनिष्ट हुँदैन’ भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग दाँजिएकोछ। अझ घरैपिच्छे खुलेका झोले अनलाइनहरु ‘हाम्रा नेताले किम जोङ उनलाई आदर्श सिकाएर आए’ भनी हेडलाईन बनाउन पनि भ्याउँछन् ।
कोहि तर्क गर्छन्, सरकार बनेकै भर्खरै हो। आत्तिएर मात्रै हुन्छ रु काम गर्न त समय लाग्छ। चाहेको भए यतिबेला सुन तस्कर, सिण्डिकेट र ठगठेगेदार सबैलाई कार्वाही भइसक्थ्यो। देशमा अर्कै माहोलको सुरुवात हुन्थ्यो र जनतालाई पनि सरकार भएको महसुस हुन्थ्यो। बिहानीले दिनको छनक देखाउँछ।
मलेसियाका इमानदार नेता मोहम्मद महाथीरले निर्वाचित भएको पाँच दिनपछि नै पचास अर्ब डलर ‘कालो धन’ जफत गरे । नौ जना ‘भ्रष्ट मन्त्री’लाई पक्राउगरि जेल हाले। भ्रष्ट, कमीशनखोर र माफियाहरू भाग्न नपाऊन् भनेर विमानस्थल र बन्दरगाहहरूमा शिल्बन्दी गरे।
उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भने मलेसियाका इमानदार नेता मोहम्मद महाथीरले निर्वाचित भएको पाँच दिनपछि नै पचास अर्ब डलर ‘कालो धन’ जफत गरे । नौ जना ‘भ्रष्ट मन्त्री’लाई पक्राउगरि जेल हाले। भ्रष्ट, कमीशनखोर र माफियाहरू भाग्न नपाऊन् भनेर विमानस्थल र बन्दरगाहहरूमा शिल्बन्दी गरे।
एक सय चौवालिस जना कालाबजारिया ब्यापारीलाई गोर्खेलौरो कसे। पचास जना भ्रष्टचारी न्यायाधीशहरूलाई ठिंगुरामा हाले । दुईसय जना रिश्वतखोर पुलिसलाई खोरमा जाके । र, जुन २०१८ को न्यूनिकृत करबारे जनतालाई सुसूचित गरेकाथिए। आखिर चाहाना र लगनशीलता छ भने हुने रहेछ त सम्भव।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी कम्युनिष्ट नेतालाई उहिल्यै साम्यवाद आएको हो। उनीहरुको न जात खोजिन्छ, न छाती नापिन्छ, न योग्यता चाहिन्छ न त वर्ग हेरिन्छ। जनतासम्म आउँदा फेरि यो अवश्य लागू भएको छ। ‘वर्गबिहिन शासन व्यवस्था’लाई ‘साम्यवाद’ भनिएझैँ उनीहरु साँच्चिकै साम्यवादकै ओछ्यानमा सुतेका छन् ? र त्यहाँ पुर्याउन प्रयोग भएका जनतालाई तिनै पानी तैरिने गल्लीका रछ्यानमा मिल्काएका छन् । यी लेखकका निजी विचार हुन यसमा सम्पादकीय सहमति हुन आवश्यक छैन । दाङ लमहीका बन्जाडे हाल वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया छन् ।)
ट्याग्स: Communist Hypocracy